Osote onye isi ala Ghana nwere nchegbu maka ụgbọ elu Africa dị elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Onye osote onye isi ala Ghana na-echegbu onwe ya banyere ụgbọ elu ụgbọ elu Africa dị elu
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye osote onye isi ala Ghana na-echegbu onwe ya banyere ụgbọ elu ụgbọ elu Africa dị elu
Nnukwu ụgbọ elu dị n'Africa, onye isi oche nke Ghana, Dr Mahamudu Bawumia kwupụtara nchegbu
Onye osote onye isi ala nke Ghana, Dr Mahamudu Bawumia gosipụtara nchegbu na nso nso a banyere nnukwu ikuku ụgbọ elu n'Africa, ọ rịọkwara mba ndị Africa ka ha mepee oghere ikuku ha site na mbenata ụtụ isi na ụgbọ elu mba dị iche iche iji bulie ụlọ ọrụ ndị njem.
Ọ bụ otu a kpọrọ oku Oke Osimiri Indian Vanilla Islands na Kọmịshọn Indian Ocean na Nzukọ Ndị Ozi ha mere Seychelles n'okpuru Onye isi ala nke onye bụbu SG mpaghara ahụ. Agwaetiti ndị ahụ welitere oku maka ụgbọ elu dị n’etiti Indian Ocean Islands nke Seychelles, Mauritius, Reunion, Madagascar, Comoros na Mayotte ka ha nwee ụgwọ ụtụ isi dị mma yana ịnagide ụgwọ iji kwado ikuku ikuku dị n’etiti agwaetiti. Ejima na nhọrọ ezumike nke agwaetiti atọ ga-eto maka abamuru nke ndị niile bi n’ógbè ahụ mgbe a na-agbadata oche na-efu n’etiti agwaetiti nke Oké Osimiri Indian iji nyere mpaghara ahụ aka ito.
Ugbu a, otu oku a ka VP Dr Mahamudu Bawumia nke Ghana kpọrọ ka ọ na-ekwu okwu na Nzukọ Nzukọ Nleta Worldwa, na Accra na Ghana na-arụkọ ọrụ na mba ndị ọzọ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa iji kwado njem n'ime mpaghara dị ka akụkụ nke atụmatụ kọntinent iji kwado enweghị visa na Africa. Ebido Summit ahụ iji weta ndị ọkachamara, ndị nwere mmasị, ndị isi egwuregwu na ndị metụtara ya na ụlọ ọrụ ndị njem na mba ụwa niile, iji kwalite itinye ego na mejupụta oghere na ụlọ ọrụ ndị njem njem mba ụwa. Ghana abụrụla mba Africa mbụ nabatara ọgbakọ a, nke nwegoro mbuli elu kemgbe amalitere ya na 2014.
Onye osote onye isi ala ahụ kwuru na Ghana ahụla ịrị elu nke ndị njem nleta ya site na 286,600 na 1995 ruo ihe ruru nde 1.2, na 2016. O kwuru na njem naanị nyere onyinye ihe dịka pesenti atọ na Ngwaahịa Gross Domestic nke mba ahụ wee nye ihe ruru 450,000 ọrụ na 2016, na uru ndị ọzọ na-apụtachaghị ìhè.
Onye osote onye isi ala ahụ kwuru na Mgbakọ a dị nnukwu mkpa nye mba ahụ dịka o kwekọrịtara na ebumnuche ya ịkwado onwe ya dị ka isi njem nlegharị anya na kọntinent ahụ. O kwuru na Gọọmentị gbara mbọ imeziwanye ikike ndị njem na, yabụ, ga-agbasi mbọ ike iji hụ na mba ahụ mezuru ebumnuche ya n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
Osote Onye isi ala Bawumia kwuru, sị: "Dị ka mba, ike anyị dị na gburugburu ebe obibi anyị dị mma, na-anabata ma na-anabata mmekọrịta, n'ihe gbasara ndị anyị, gburugburu ebe obibi anyị, nchekwa, yana ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwụsiri ike." O kwuru na Ghana lekwasịrị anya n'ịrụpụta ihe ọhụụ na ịkwalite akụrụngwa ndị njem maka iji kwado ụlọ ọrụ ndị njem na-eto eto.
Onye osote onye isi ala kwuru na ọrụ gọọmentị na-eme bụ njem nlegharị anya bụ mmụba na ndozi nke ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, Kotoka International Airport, iji mee ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ ámá West Africa na Mpaghara Ọdụ Aviationgbọelu. O kwuru na ọrụ mmeba ugbu a na ọdụ ụgbọ elu pụtara ìhè ma gbakwunye na, Mịnịstrị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ọdịbendị na ndị na-ahụ maka mmejuputa iwu, dịka Ghana Tourism Authority na Ghana Tourist Development Company, na-ebute ụzọ maka Marine Drive Investment Project iji bulie njem mpaghara.
Ihe oru a choputara mmepe nke ala 241 dum nke ala di n'akụkụ osimiri ime njem nlegharị anya iji gboo mkpa ndi oru ahia na ndi njem nleta, ebe Ghana mere ebe ndi njem njem kachasi nma n'Africa. Mgbe arụchara ọrụ a, a na-atụ anya na ọ ga-anabata ihe karịrị ụlọ iri asaa na ụwa, egwuregwu na ogige ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ shoppingụ, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ nzukọ ọgbakọ, ebe a na-eme egwuregwu, obodo omenala na ebe a na-eme njem.
Onye osote onye isi ala Bawumia kwuru na njem bụ ihe kachasị mkpa nke ebumnuche gọọmentị. Iji mezuo nke a, o kwuru, Gọọmentị emezigharịla Mịnịstrị na-ahụ maka njem nlegharị anya ma họpụta onye otu nọ n'ọkwa dị elu, Madam Catherine Afeku, dị ka Mịnịsta nke njem nleta, nka na omenaala, yana ọrụ nke iji hụ na Ghana si ebe a pụọ Mpaghara a na-eti na mpaghara onye ọkpụkpọ njem nlegharị anya nke Africa. Ọ chọpụtara na ngalaba njem nke mba ahụ agaala n’ihu kemgbe ọtụtụ afọ, ya mere, ọ bụ ihe obi a happyụrị na esiri n’etiti ọtụtụ mba ndị ọzọ tozuru etozu kwado ọgbakọ a nke afọ a.
Onye osote onye isi ala Bawumia kwuru na ịhọrọ isiokwu, dị ka Njikwa Njem, Njem Nleta, njem nlegharị anya, njem nlegharị anya na njem nlegharị anya na mmemme nke afọ a gosipụtara ihe mgbaru ọsọ nke mba ahụ na ọtụtụ ebumnuche mba Africa ndị ọzọ ịkwado onwe ha dịka ndị isi egwuregwu na ọtụtụ ijeri dollar ụlọ ọrụ.
Zọ a na-atụ anya nke ngalaba ndị njem, dịka National Development Development Plan si kwuo, nwere ihe karịrị okpukpu abụọ nke njem njem njem na $ 8.38 site na afọ 2027 site na $ 2.2 dị ugbu a.
Iji mezuo ebumnuche a dị ukwuu, Gọọmentị etinyela aka na ụzọ nke inye ọnọdụ dị mma maka itinye ego maka njem nleta, na-ebelata nrụgide azụmahịa na ndị na-ahụ maka azụmahịa ndị njem, yana iweghachi ihe mkpali kwesịrị ekwesị iji bulie uto.
Isi Iyi: GNA